भित्रियो नयाँ भाइरस, भोलि देखि १ महिना सम्म लकडाउन, पुरा हेर्नुहोस् – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/भित्रियो नयाँ भाइरस, भोलि देखि १ महिना सम्म लकडाउन, पुरा हेर्नुहोस्
काठमाडौ। नेपालमा भित्रियो नयाँ भाइरस, लकडाउन गर्ने तयारी, २ सय ३५ जना नागरिक निगरानीमा १४ जना क्वारेन्टाइनमा छन्। उनीहरूको स्वाब नमुना संकलन गरी नेपालमा नयाँ भाइरस प्रवेश भए÷नभएको अध्ययन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा दिनेश गौतमले लेखेका छन्। बेलायतमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस फेला परेपछि उक्त मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका २ सय ३५ जना नागरिक निगरानीमा परेका छन्। *** यो समाचारको पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****
डाक्टरको समय लिएर घर गइसकेपछि कुराकानीको क्रममा टोनकी श्रमितीले आफ्नो ती डाक्टरसँग केही समयदेखि स;म्ब;न्ध भएको खुलासा गरिन् । टोन र उनकी श्रमितीको स;म्ब;न्ध झनै बिग्रियो र अन्ततः उनीहरुले २०१९ मा स;म्ब;न्ध;वि;च्छेद गरे । रोसेनका कारण टोनले मानसिक र भावनात्मक तनावका साथै सामाजिक रुपमा समस्याको सामना गर्नुपरेको र उनको वैवाहिक सम्बन्ध समेत बिग्रिएको अदालतमा दायर गरिएको अभियोग पत्रमा जनाइएको छ
दुखद समाचार ! पारस यादवले झु’ण्डिएर आ’त्मह’त्या
प्रेमीको श,ब ज’लि रहँदा प्रे’मिकाको श,ब ब’ग्दै आएपछि….
Breaking : हेटौँडाबाट जाँदै गरेको ट्रकले पर्खाल भत्काउँदै घरमा ठोक्किदा, सडकमा मागी हिँड्ने तीन जनाको मृत्यु
Beraking News..मन्त्रालयले भर्खरै जारि गर्यो यस्तो सुचना, भोलिबाट ७७ जिल्लामा यस्तो हुने !
Breaking…..प्रवासमा श्रीमान, गाउँमा बसेकी श्रीमतीको देवरले गरे भाउजुको ह’त्या,